ကျစ်လစ်သိပ်သည်းကမ်းခြေတိုက်ခန်း + ရေကူးကန်!
ခံစားချက်တွေကို မြို့အားလုံးAdejeAgua DulceAlcalaArafoArguayoAricoAronaBajamarBuenavista Del NorteBuenavista ဂေါက်သီးCandelariaayရာဝတီကChioကော့စတာ Del SilencioCueva De PolvoCueva Del Vientoအယ်လ်ဂျာရာလာအယ်လ်မက်ဒီနိုအယ်လ်Porísအယ်လ် Prisအယ်လ် Sauzalအယ်လ် TanqueFasniaGarachicoမျိုးရိုးဗီဇGranadilla De AbonaGuia De IsoraIcod De Los VinosguရာဝတီJoverla Calderala Caleta De Guimarla Caleta De InteriánLa LagunaLa Montañetala Orotavala Reinala VegasLas Aguasအမေရိကတိုက်Las CaletillasLas CaletitasLas ErasLas GalletasLas LagunetasLas ManchasLas Portelasလာ့စ်ဗီး RosaLos AbrigosLos CristianosLos GigantesLos RealejosLos SilosMascaPalm MarPalmarParque De La ReinaPlaya De La ArenaPlaya De San JuanPlaya ParaisoPlaya စန်းမားကို့စပလာယာ SiboraPuertito De GuimarPuerto De La CruzPuerto De SantiagoPunta De HidalgoRadazulစန်းအန်ဒရေ့စ်San Eugenioစန်း IsidroSan José De Los LlanosSan Juan De La RamblaSanta Cruz De TenerifeSanta Ursulaစန်တီယာဂို Del TeideSotavientoကျောက်တံတားတကွန်းပုဂံTajaoTamaimoTauchoTejina De IsoraTierra Del TrigoValle De Guerra
ပင်မစာမျက်နှာNice Compact ကမ်းခြေရှိတိုက်ခန်း + ရေကူးကန်!
ရောင်းရန်: Playa de la Arena, Tenerife ရှိအထူးအိမ်ခြံမြေများ
La Arena ကမ်းခြေနှင့်မီတာ ၁၀၀ အကွာတွင်တည်ရှိသောအလွန်ကောင်းသော၊ ပရိဘောဂအပြည့်အစုံ
တိုက်ခန်းနှင့်ရေကူးကန်သို့ဝင်ရောက်ရန်တက်ရန်လှေကားမရှိ။ ရေကူးကန်မှာ ၅ မီတာသာကွာဝေးသည်။
Playa Arena ရှိကျယ် ၀ န်းသော Ocean Front တိုက်ခန်း!
La Arena သဲသောင်ပြင်ရှေ့တွင်အသင့်တော်ဆုံးတိုက်ခန်း။
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် Ocean Front တိုက်ခန်း။ လုံးဝအသစ်
Oceanfront Penthouse + ရေကူးကန် !!
La Tejita သဲသောင်ပြင်အနီး, El Medano!
အယ်လ် Medano, Granadilla က de Abona Tenerife
Adeje Alcala Arguayo Arona Bajamar Buenavista del Norte Candelaria အယ်လ်မက်ဒီနို အယ်လ်Porís အယ်လ် Tanque Garachico Granadilla က de Abona Guia de Isora Icod က de Los Vinos guရာဝတီ la Caldera la Caleta က de Interián La Laguna la Orotava အမေရိကတိုက် Las Caletillas Las Portelas Los Cristianos Los Gigantes Los Realejos Los Silos Masca Palm Mar Playa de la Arena စန်း Juan သဲသောင်ပြင် Playa Paraiso Playa စန်းမားကို့စ ပလာယာ Sibora Puertito က de Guimar Puerto de la Cruz Puerto de Santiago Punta က de Hidalgo စန်းအန်ဒရေ့စ် စန်း Isidro San Juan de la Rambla Santa Ursula စန်တီယာဂို del Teide ကျောက်တံတား ပုဂံ Tamaimo